भावनात्मक निबन्ध | मझेरी डट कम
editor — Sat, 09/22/2018 - 17:30
धेरै समय बितिसक्यो आफूलाई खोज्न निस्केको तथापि पत्ता लगाउन सकिन। आफूलाई छुन्छु। छाम्छु। नाप्छु। जोख्छु। ऐनामा हेर्छु। कहिले रुन्छु। कराउँछु। चिच्याउँछु। हाँस्छु नाच्छु। गाउँछु। ईश्वर पुकार गर्छु। सुक्ष्मदृष्टि लगाउँछु। अनि प्रश्न गर्छु- “के म यही हो ? हैन भने म को हुँ ?“ तर यतिले मेरो जिज्ञासा के मेट्थ्यो। झन झन मेरो तिर्सना र भोक बढ्दै गयो र आन्तरिक यात्रामा निस्कें।
editor — Sat, 04/01/2017 - 23:52
editor — Sat, 10/08/2016 - 21:29
‘सपना त ती हुन् जसले मानिसलाई निदाउँन दिँदैनन्’ – एपिजे अब्दुल कलाम
जुन दिन मैले भारतीय पूर्वराष्ट्रपति स्व.एपिजे अब्दुल कलामका प्रेरक भनाइहरूको सूचीमा उक्त भनाइ देखेँ, त्यसले मलाई नराम्ररी छोयो । झिलिक्क बिजुली चम्केजस्तो भयो मेरो सम्पूर्ण चेतना । मुटु ढक्क फुल्यो । ठूलै नयाँ चीज पाएँजस्तो लाग्यो । धेरैबेर ती शब्दहरू र शब्दहरूले दिएका मिहिन भाव र अन्तर्यबारे टोलाई बसेँ ।
सिक्नु एउटा सुरुवात
editor — Mon, 08/29/2016 - 21:46
मेघ नलागेको दिन झुर्लुक्क घाम झुल्केपछि सफा पोखरी वा तलाउमा हेर्दा पानीभित्र सूर्यको कोमल फूल फुलेको देखिन्छ । लाग्छ, सूर्यको त्यो आभा मानिसको मुहारमा पोखियोस् । सूर्यको त्यो मुस्कान मानिसको ओठमा टाँसियोस् । अनि भरियोस् सधैंसधैं जिन्दगीमा त्यस्तै अनन्त ऊर्जा ! त्यस्तै अपार जोश र जाँगर !!
editor — Mon, 03/14/2016 - 04:05
म मेरो देशलाई श्रद्धा र आदरपूर्वक दण्डवत् गर्न चाहन्छु । मलाई थाहा छ आफू जन्मेको देशको कति माया हुन्छ ।
रामायण भन्ने महाकाव्यमा भनिएको छ ‘जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी’ (जन्म दिने आमा र जन्मिएको धर्ती स्वर्गभन्दा पनि प्यारा लाग्छन्) । मलाई मेरो देशप्रति अति माया र ममता छ किनकि म यो देशमा जन्मन पाएँ । मेरो देश नभएको भए म कहाँ जन्मिन्थे कहाँ ? मलाई मेरो देशको नागरिक हुन पाएकोमा आफैँलाई गर्वानुभूति भएको छ ।
कुसे औँशी, बुवा र म
गोपीलाल कँडेल — Tue, 09/15/2015 - 11:04
आज कुसे औँशी । बुवाको मुख हेर्ने दिन । बुवा तपाई अहिले सशरीर मसँग हुनुहुन्न । तर तपाईको आत्मीय शरीर मेरै ओरीपरी घुमिरहेको छ । मसँगै छ । तपाई मलाई हेरिरहनु भएको होला । मलाई अर्ती उपदेश र आशिरवाद दिइरहनु भएको होला । तर बिडम्बना म न त तपाईलाई देख्‍न सक्छु न त सुन्न नै सक्छु । म अहिले तपाईको तस्वीर सामु हातजोडेर उभिएको छु । भित्तामा झुण्ड्याइएको तस्बीरमा मैले तपाईलाई देखिरहेको छु । यस्तो लाग्छ तपाईंले पनि मलाई हेरिरहनु भएको छ । बुवा ! मलाई आजको दिनमा तपाईको आशिरबादको आवश्यकता छ, शान्तिसुरक्षा अमनचयनको निम्ति प्रशस्त आशिरवाद दिनुहोस् ।
पोख्रेल भाइ लाई खुल्ला पत्र : :नेरुता मोक्तान ,ससफो नेपाल
neruta moktan — Wed, 08/19/2015 - 20:57
पोखरेल भाइ तिमी जाहा छौ आफ्नो इमान्दर नगुमाउ !
बेलैमा आफ्नो असलि रुप लिएर प्रदा अगाडि आउ ! हुन त कसरी आउथेउ र अनुहार देखाउने क्षमता नै गुमाइ सके पछि ! तिमीले यो काम गर्न पहिले आफ्नो जन्मदिने आमा पनि नारी हुन भन्ने कुरो कसरी बिर्सेउ भाइ ! तिमी जस्तो एजुकेटेड देशको भारी बोक्ने युवाले यस्तो काम गर्यो होला भनि सोच्न सक्ने ज्ञान नै पाउन सकिन । जुन तिमीले सुमित्रलाई दियको तनाव ग्रष्त घातले तिमीलाई भोलि आउने दिनमा कस्तो परिनाम ल्याउला भनेर किन सोचेनौ भाइ ? नारिको पिडा नबुज्ने तिमी एक महिलाको कमाइले शुखी जिबन गुजार्न खोज्ने तिमीले खुसी कहिले पाउने छैन भाइ राजनिती बुज्छौ होला तिमी रणनिती रच्छौ होला तिमी तर सहि ठाँउमा प्रयोग गर्नु पर्छ तिमी मात्रै जान्ने सुन्ने र एजुकाटेड छैन भाइ यो एक्काशौ सताब्दी हो भन्ने तिमीलाई पनि थाहा छ ! तिमी एकान्तमा बसेर सुमित्रले कोरेको समाचार टुल पुल हेर्दै बसेका छौ होला मान्छे हो गलत हुन्छ नडराउ भाग्नु लुक्नु पर्दैन भाइ जाहाँ छौ प्रदा अगाडी आउ हामी सबै मान्छे हौ देख्न साथ तिमीलाई क्वाप्पा कसैले खाँदैन सुमित्रको खबर अनुसार तिमी हिन्दुराष्ट्रको आन्दोलन अगुवा हो भन्ने बुझे भाइ तिम्रो मुद्धको एजेणडमा के महिलाइ ठगेर खानु भन्ने रोल छ र ? राजनिती बुझेको मान्छेले त महिलाई मायाँ सम्मान आफु सरह रेस्पेक्ट गर्नु पर्छ भन्ने हैन र भाइ ?
सुमित्रले जे गुमाए तिमीलाई नै दिउला भाइ तर एनि हाउ प्लिज कम आउट एण्ड रेस्पेक्ट योर सेल्फ । यसरी महिला माथिको धाव हेरेर बस्ने ति पुराना महिला हरु जस्तो अहिलेको महिला छैन भाइ सायाद तिमी त 10 बर्ष युकेमा बसेर अहिले गणतन्त्र नेपालको महिला लाई नचिनेको हुन सक्छ ! तर पनि नडराउ भाइ फेरी पनि एकचोटि2हात जोडि भन्न चाहान्छु जाहाँ छौ बाहिर आउ । उहि तिम्रो दिदी नेरुता मोक्तान संघिय समाजबादी फोरम नेपाल !
विपत्तिमा छटपटाएको गाँऊबस्ती
san — Sun, 05/03/2015 - 16:14
एक हप्ता अगाडि मातातिर्थ औंसीमा म घर जाँदा सिमसिमे परेको पानीसँगै हरीयालीले छाएको मेरो गाउँ हप्ता दिनमै एकाएक उजाडिएको छ । गत शनिवार लमजुङलाई केन्द्रविन्दु बनाएर गएको ७.८ रेक्टर स्केलको विनाशकारी महाभूकम्पले मेरो गाउँको सौर्न्दर्यता लुटिदिएको छ । खुशीलाई आँशुमा बदल्दिएको छ । सबैको मनमा पीडा दिएर आँशु झेलमा रुमलिदिएको छ । मध्ये दिनमा गएको यो महाभूकम्प भयानक कालरात्रीमा बन्न पुग्यो । विपतको यो घडीमा स्वदेशी, विदेशी र नेपाल आर्मी, शसस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरीका साथै अन्य संघ संस्थाहरूले र्घाईतेको उद्धार गर्न तल्लिन भएर खटिएको छ । कसैले पनि नसोचेको विपत्तिले छट्पटाएका छन अधिकांश गाउँबस्तीहरू ।
krantibir — Sat, 03/14/2015 - 07:08
अपरिचित बाबाको धेरै धेरै सम्झना l
घरै भित्र पालिएका मानवरुपी दानबहरूबाट तिमीहरूमा भएको एसिड आक्रमणको खबरले मर्महात भएको छु l तिमी प्रतिको अन्यायले सिंगो देश रोएको बेला मेरा आदर्शका शब्दले मलम पट्टिको काम गर्ने छ भनेर मैले किमार्थ सोचेको छैन l पुरुष भएर जन्मिएको पश्चातापले आफूलाई जलाइरहदा शब्दहरूको घोडा चढेर राहतको अनुभूति लिने मात्र प्रयास गरेको हु अन्यथा सोची दिने छैनौ l
bishwas lama — Sat, 09/27/2014 - 17:37
जीवनका आरोह अनि अबरोहभित्र गुम्सिएको जीवनका भोगाइहरू सबैको आफ्नो आफ्नो नै हुन्छ्न । समय त्यो छाल हो जस्ले जीवनको कुनै पनि मोडहरूमा हुरी बतास ल्याई जीवन तहस नहस अन्धकार बनाउन सक्छ ।
यहाँ सबैको आफ्नै कथा छन आफ्नै बेथा छन, बस अर्काको दुखको काहानी सुन्ने कसैलाई फुर्सद छैन । फरक यत्ति नै छ यहाँ कोही बितेको जीवनभित्रको दु:खमा पिल्सिएका छन् । कोही माया गरेर मायाको त्यो पलभित्र पिल्सिएका छ्न, कोही सपना अनिरहर भित्रको जीव भित्र पिल्सिएका छन ।
editor — Tue, 04/29/2014 - 06:50
प्राणी मात्रको सबभन्दा नजिक र प्रिय आमा नै हुन् । गर्वअवस्था देखि आजीवन अविरल र निश्वार्थ हित चाहनाले आमालाई मायाकी खानी पनि भनिन्छ । शृष्टि, पालन, संरक्षण, शिक्षा तथा सांस्कृति प्रदान गर्ने आमा नै वास्तविक जिउदो देवता हुन् । प्रकृतिले आमा र उनी भित्र माया नदिएको भए जीव सृष्टिबाट नै ठुलो प्रभाव पर्ने थियो होला । सम्पूर्ण जीव जगतको अध्ययनमा ठुला देखि असम सानासम्म जीवको आमाले सन्तानको हित सम्रक्षणका लागि जस्तो सुकै जोखिम उठाएको उदारहणहरू पाइने गर्दछन । यस्तो काम गर्न सक्ने शक्ति ईश्वरले प्रदान गरेका हुन्छन किनकि आमा नै शृष्टि गर्नका लागि ईश्वरकि प्रतिनीधि हुन् ।
editor — Fri, 01/03/2014 - 19:45
म यतिखेर आनी चोइङ डोल्माले गाएको कवि दुर्गालाल श्रेष्ठद्धारा रचित गीत सुनिरहेको छु । गीत सुमधुर स्वरमा बगिरहेछ मेरो कानमा –
फूलको आँखामा फुलै संसार
काढाको आँखामा काढै संसार
झुल्किन्छ है छाँया बस्तु अन्सार ।।
चित्त शुद्धहोस् मेरो बोली बुद्ध होस्
राम्रो आँखामा खुल्छ राम्रै संसार ।।
HomSuvedi — Tue, 08/27/2013 - 13:28
म पोहोर साल एक दिन बिहानै यात्राको क्रममा दार्जिलिङको टाइगर हिलमा थिएँ । त्यहाँ घामको झुल्कँदो दृश्य हेर्न मान्छेहरूको निकै घन्चा हुन्छ भन्ने सुनेको थिएँ, हुँदो पनिरहेछ । मलाई पनि के के न होला भनेर यो दृख्य हेर्ने मन थियो धेरै पहिल्यैदेखि । यतै पढे यतै बढें, तर यो दृश्य हेर्न पाएको थिइनँ, यसैले म थिएँ बडो व्यग्र । अनि बडो व्यग्र भएर म त्यहाँ पुगेको थिएँ । त्यहाँ पुग्नु पनि थियो । पुगियो कसै गरी । तर मेरो घाम झुल्केको दृश्य हेर्ने त्यस यात्रामा घाम झुल्कना साथ घामको दृश्य देखिनुको साटो सिमसिमे पानी परेको दृश्य आँखामा परिदियो । पाहिलो पटक मेरा यात्रामा घामको झुल्कँदो दृख्य हेर्ने इच्छा यसरी मरेर गयो । सिमसिमे घामपानी परेको दृश्यका लािग मैले यतिका टाढा आइरहनु पर्ने थिएन । यस्ता दृश्य अनगन्ती देखिएका हुन् । त्यो यात्रामो झुल्कँदो घामको दृशय हेर्ने इच्छा अच्कल्टियो । यो दृश्य हेर्नकै लागि भने मैले मेरै घरको करेसोबाट टाढा जानै पर्देनथ्यो ।
तीन मुक्तक (नैनतीर)
म मरे नि खुसी हुनु सधै हुन जाती
गमलाको फूल झैं
कर्मयोगी लक्ष्मण सर